निद्रा नलागे के गर्ने? - Khabarshala निद्रा नलागे के गर्ने? - Khabarshala
खासगरी यी विभिन्न निद्रा हामी सुतेको बेलामा एकपछि अर्को हुँदै चक्रीय रूपमा आइरहेका हुन्छन्। हल्का निद्रामा हामी कसैले बोलेको थाहा पाउँछौं झसङ्ग भएर उठ्न सक्छौं। त्यस्तै आँखाको गेडी हल्लिने निद्रामा पनि। तर जब गहिरो निद्रामा हामी हुन्छांै, त्यो बेला हामीलाई केही थाहा हुँदैन। यस्तो निद्रालाई भाते निद्रा भनिन्छ। हाम्रो मस्तिष्कको आरामलाई यो अति आवश्यक छ। हाम्रो शरीरको स्वास्थ्यका लागि करिब ६ घण्टा निद्रा आवश्यक पर्छ। बालक तथा बिरामी पर्दा बढी घण्टा निद्रा आवश्यक पर्छ। कहिलेकाहीं एक दिनको निद्रा बिथोलियो भने अर्को दिन यसले असर गर्दछ। त्यसैले भनिन्छ, एक दिनको निद्राले ७ दिन पिरोल्छ।